Yintoni ifonti yeNetflix? | Abadali be-Intanethi
Yintoni ifonti yeNetflix?
Kwi-brand kubalulekile ukuba ube nesazisi esichazwe kakuhle, oku kuya kuqinisekisa ukuba abathengi banokuhlula kukhuphiswano lwayo kwaye bade badle. Uluntu alugwebi kuphela uphawu ngezinto ezinikezelayo okanye ixabiso, ziphinde zijonge izinto ezibonakalayo ezizenzayo, njengemibala, i-typography, i-logo, njl. Bakhangela i iibrendi zinxibelelana nendlela abaphila ngayo ke le miba siyikhankanyileyo ithatha isigqibo kunxibelelwano oluxeliweyo.
Namhlanje iNetflix yaziwa njengenye ye Iiplatifti ezihamba phambili zokusasaza enye yeekhathalogu ezinkulu zomxholo we-audiovisual kodwa ayikho kuphela kwihlabathi le-audiovisual kodwa ngamaphulo ayo onxibelelwano kunye nobuchule bayo, ibe yenye yezona mpawu zinamandla kwimarike.
Enkosi kolu nxibelelwano olumangalisayo, masikhumbule iphulo elibi kwiPuerta del Sol yaseMadrid "Oh iKrisimesi emhlophe" xa uchungechunge lweNarcos lwaba luchungechunge olujongwe kakhulu, inkampani ifakwe enye yezona zenzo ezixhokonxayo ezikhunjulwayo . Ngolu hlobo lwesenzo fumana indlela egqibeleleyo yokuthetha noluntu.
Ukuqhubeka nale ngcamango, yokudibanisa noluntu, uye wathatha inyathelo elingaphezulu kwaye uye wadala i-typography yakhe; I-netflix yokuchwetheza: iNetflix Sans.
1 Hamba kakuhle Gotham
2 I-bespoke typeface
3 I-Netflix Sans: i-typography elula kwaye ecocekileyo
Hamba kakuhle Gotham
U-Netflix uthe ndlela-ntle kwiqabane lakhe elithembekileyo I-Gotham, i-typeface eqhelekileyo kwilizwe loyilo. I-classic typeface enenjongo ephambili yayikukuququzelela ukufaneleka kwezinto zonxibelelwano ezilungiselelwe zonke imidiya apho la maphulo avela khona.
Kumnqweno wayo oqhubekayo wokutshintsha, iNetflix itsibela kwi-bandwagon ezininzi iibrendi ezamkelayo, ezinkulu nezincinci, kwaye ayikho enye ngaphandle yenza eyakho i-typography yenkampani, isimbo sochwethezo.
Inkqubo yokwenza ifonti yesiko lophawu yinkqubo ecothayo kwaye ehlala itshintsha, iNetflix ibigqibezela izigaba kwaye isebenza kuyo nganye kuzo kwisazisi sayo esibonakalayo, konke oku kuhlala kuhleli. ukugcina imilinganiselo yabo.
Kwaye uya kuthi, unesibindi kangakanani ukubheja ngokwenza eyakho i-typography? Ngaba akuyongozi kakhulu? Kulungile asiyiyo yodwa yokuphuhlisa uhlobo lochwethezo lwesikoKungekudala, iimpawu ezinkulu ezifana neCoca Cola, i-IBM okanye iqonga le-YouTube liyenzile.
Kusengqiqweni ukuba inkampani enkulu njengale sithetha ngayo, iNetflix, kwaye ngempumelelo enkulu eyivuna phakathi koluntu, ifuna zigqame kwezinye iibrendiukhuphiswano okanye hayi. Ukukwazi ukubonelela ngomgangatho ophezulu we-audiovisual content ngaphandle kwekhefu lokuthengisa kuthatha i-Netflix kwinqanaba eliphezulu kuneendaba eziqhelekileyo esaziyo namhlanje.
Ukudala ibhrendi yakho lukhuthazo oludingayo ukuze wenze umfanekiso ocacileyo wegraphic. Ukuchwetheza kweNetflix; Netflix Sans, yi efundekayo, elula kwaye ecocekileyo yokuchwetheza, enceda unxibelelwano lwakho ukuba luqondakala kuzo zonke imidiya, zombini kwi-intanethi kunye nokuprintwa.
Xa kuphuhliswa uhlobo lochwethezo olwalufunwa yinkampani, imiba emibini ebalulekileyo ithathelwe ingqalelo: i ubuhle kunye nokusebenza. Imilinganiselo yoonobumba bayo abakhulu ifuna i-aesthetic yekinematics kunye noonobumba abancinci bahlangene kwaye bayasebenza.
Umntu ojongene noyilo lweNetflix nguNowa uNathan kwaye uchaza ukuba isigqibo sokungena kwihlabathi lokudala isazisi salo siphendula kwiinkalo ezimbini. Eyokuqala kwaye ibaluleke kakhulu kukunika indlela, ukudala into ekhethekileyo, a ubuntu bakhe kwi-brand Kwaye yenze ibe yekhethekileyo kwiNetflix. Kwaye kwelinye icala, okwesibini, i ukunciphisa iindleko Kutheni unciphisa ukuba iNetflix yinkampani enkulu? Kulula kakhulu ukuphendula. I-Netflix yenza amaphulo eentengiso ezininzi rhoqo nakwiindawo ezahlukeneyo kunye namazwe, ke ukuba nesazisi sakho kunceda ukugcina iindleko ziphantsi, kuba ukuba usebenzise ifonti eqhelekileyo, iilayisensi zibiza kakhulu kuba amaphulo ehlabathi.
Ezi ngxabano zimbini, ukudala isazisi sabo kunye nokugcina iindleko, zizizathu ezifanayo eziye zakhokelela ezinye iimpawu ukuba zithathe le nqanaba.
I-Netflix Sans: i-typography elula kwaye ecocekileyo
Iqela loyilo elaqala ukusebenza kuhlobo lochwethezo lithathele ingqalelo izinto ezininzi, enye yazo yayibubungakanani bescreen sebhanyabhanya xa sisenza oonobumba abakhulu kwaye enye ingongoma yayikukuba oonobumba abancinane kwakufuneka bacuthene kwaye bafundeke. ilahlekile. Ngala magama mabini acacileyo okuqala, a ukuchwetheza okupheleleyo ngobunzima bayo obahlukeneyo: emnyama, engqindilili, ephakathi, eqhelekileyo, elula kwaye ebhityileyo.
Yonke into yayingayi kuhlala kuyilo lokuchwetheza olulula nolucocekileyo, kodwa kunokuba sifumane quirks kuye. Ukuba sijonga unobumba omncinci u-t, ijika livela kwipali enyukayo phezulu, ngokutsho kwabadali bayo, iphefumlelwe yi-curve ye-movie screens.
Isishwankathelo, besifuna ukwenza i-typography ngesiseko, isitayile esilula, kunye nokuzinikela okucacileyo ekusebenzeni kunye nokufundeka, Ukuphelisa ukugqwesa okubangela ukuphazamiseka koluntu.
Le nto yoyilo, efana nokuchwetheza, inokubonakala njengenye okwangoku, kodwa ngokwenene yenye awona manqaku athatha isigqibo xa unxibelelana kunye nokunxibelelana noluntu. Ngokungazi, imiyalezo ithunyelwa kubathengi abanokuchaphazela intsingiselo okanye umbono womxholo oboniswe kubo.
Iqonga lomxholo weaudiovisual, Ilapha ukuhlala kwaye ikwazile ukoyisa amakhaya ethu. Akunjalo nje ngenxa yomxholo omkhulu osinika yona, kodwa kwakhona sibulela ngolu tshintsho esiye sathetha ngalo, ukwakha uphawu lwayo oludibanisa nabo bonke abaphulaphuli ngesitayela esisondeleyo kunye nesinye.
Netflix iye yaba a ireferensi kwihlabathi lesikrini kodwa nakwilizwe lokwazisa ngombulelo kuphuhliso lophawu oluyimpumelelo, ukuthatha imitsi kunye nemida.
Ifonti yeNetflix, iNetflix Sans, inesazisi sayo kodwa ayisoze ilawule umxholo oyijikelezileyo, ekugqibeleni. i-typography kunye nezinye izinto kufuneka zihlale kunye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Yintoni ifonti yeNetflix?
Eyona magazini yoyilo lwegraphic
Yintoni umphumo weparallax